Ciidamada ATMIS oo qof Shacab ah ku dilay Muqdisho iyo Arday la rasaaseeyay.
20/06/2022 - 12:29:47 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay Rasaas maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka ay ku fureen Arday ku sugneyd Afaafka hore ee School lagu magacaabo Macalin Jaamac oo ku yaala degmada Xamarweyne ee magalada Muqdisho.
Al Shabaab oo soo saartay Bayaan lagu difaacyo Nabiga SCW.
20/06/2022 - 12:01:20 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Hoggaanka Xarakada Al-Shabaab ayaa soo saaray Bayaan lagu difaacayo Sharafka Nabigeena Muxamed صلى الله عليه وسلم oo dhawaan ay Aflagaadeeyeen Mushrikiinta gaalada Hindiya.
NISA oo xirtay ciidamo ilaala u ahaa Xildhibaan Kulane Jiis.
20/06/2022 - 06:41:35 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Wax u eg aargoosi siyaasadeed ayaa lagula kacay mid kamida saraakiishii ugu sarreeyay sirdoonka DF-ka xilligii uu talada hayay Max'med Cabdullaahi Farmaajo.
19/06/2022 - 13:40:08 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Isbaheysiga NATO ayaa walaac ka muujiyey amniga hawada ee dowladaha dhoco bariga qaarada Yurub, 3 maalin kadib markii diyaarad yar ay isaga kala gudubtay xuduudaha ilaa lix dal ka tirsan isbaheysiga, Taas oo marki danbe ku dagtay garoon ku yaala dalka Bulgaria, waxaana lagu guul dareystay in gacanta…
19/06/2022 - 12:34:57 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa ka dhoofay wafi ballaaran oo uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha cusub ee dowladda Federaalka.
DF oo beenisay eedayn kasoo yeertay shirkadaha diyaaradaha maxalliga ah.
19/06/2022 - 12:30:09 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Dowladda Federaalka ayaa waxba kama jiraan ku sheegtay cabasho kasoo yeertay shirkadaha duulimaadyada ee ka shaqeeya dalka Soomaaliya.
Kooxo Hinduus ah oo qoorta ka jaray Imaam Masjid.
19/06/2022 - 11:17:46 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Wadanka Hindiya waxaa wali kasii socda xadgudubyada aadka udaran ee ka dhanka ah dadka muslimiinta.
Dagaalyahanno Jihaadi ah oo Askar ku dilay deegaan katirsan Sh/dhexe.
18/06/2022 - 17:43:55 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in weerar khasaara dhaliyay lagu beegsaday maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka.
Sarkaal katirsanaa maamulka 'Koonfur Galbeed' oo lagu dilay degmada Afgooye.
18/06/2022 - 16:28:44 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan dhanka galbeed uga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Midowga Afrika iyo hay'ado reergalbeed ah oo walaac ka muujiyay walxaha qarxa.
18/06/2022 - 16:24:26 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Shirkan oo ahaa mid looga hadlayey dhibaatada waxyaabaha qarxa ay ku hayaan ciidamada duullaanka ku jooga Soomaaliya ayaa waxaa magalada Muqdisho ku yeeshay Saraakiisha ugu sarreysa howlgalka midowga Afrika ee ATMIS loogu yeero, hay'adda gaalada Qaramada Midoobay u qaabilsan la dagaalanka Qaraxyada,…
Dawladda Ingiriiska oo joojisay taageeradii ay u fidin jirtey Maamulka Somaliland.
18/06/2022 - 13:32:22 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Dawladda Ingiriiska ayaa hakisay taageeradii ay u fidin jirtey 'Somaliland' ka dib markii ka war heleen sidii ciidanka ammaanka ee maamulku ula dhaqmeen mudaharaadayaashii ay horkacayeen mucaaradku maalinnimadii Khamiistii ee June 9, 2022.
Xoghayaha guud ee Xisbiga Waddani oo sheegay in gurigiisa la gubey.
18/06/2022 - 12:42:18 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Xoghayaha Guud ee Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani ayaa sheegay in guriisa dab la qabadsiiyey, dabkaas oo dhaawac u geystay albaabka hore ee hoygiisa. Khadar ayaa sheegay in uu dhacdadan ku wargeliyey haayadaha ammaanka ee ku shaqada leh si ay u baadhaan.
Dagaal ka dhacay Baxdo iyo Al-Shabaab oo war kasoo saaray.
17/06/2022 - 09:55:07 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Dagaal aad u xooggan ayaa aroornimadii hore ee saaka ka qarxay deegaanka Baxdo ee gobolka Galgadud kadib markii dagaalyahanada Xarakada Al Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga maleeshiyaatka maamulka Galmudug ku leeyihiin deegaankaasi
Wariye Booqday wilaayaatka islaamiga oo ka warbixiyay wixii uu soo arkay [Wareysi].
16/06/2022 - 18:45:54 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Wariye u shaqeeya Telefeshin fadhigiisu yahay magaalada London oo dhowaan booqasho ku tagay wilaayaadka Islaamiga ee dhaca Koonfurta Soomaaliya ayaa ka warbixiyay wixii uu soo arkay.
16/06/2022 - 17:09:38 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Matxaf ay leeyihiin Yahuudda ayaa dhawaan laga hirgeliyay dalka Indonesia oo ah wadamada caalamka Islaamka midka ugu dadka badan, waxaana laga furey matxafka bartamaha gobolka wuqooyiga Solawizi ee Indonesia.
Dad ku dhintay iska hor'imaadyo Cafarta iyo Soomaalida ku dhaxmaray gobolka Sitti.
16/06/2022 - 16:50:17 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya galbeedka gobolka Sitti ee dhulka Somaaligalbeed ayaa sheegaya in weerar ka dhacay deegaan hoosyimaada magaalada Cundhufa lagu dilay 6 ruux oo Soomaali ah 4 kalana lagu dhaawacay.
Guriga Cabdiraxmaan Cirro oo la sheegay in la weerarey.
16/06/2022 - 16:47:17 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Musharraxa Xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Cirro ayaa la sheegay in gurigiisa la weerarey. Masuuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ayaa sheegay in is rasaasayni dhex martey ilaalada Cabdiraxmaan iyo Booliska inkasta oo aanay jirin wax khasaare ah.
16/06/2022 - 16:46:45 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Weeraro khasaara dhaliyay ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno katirsan gobollada Wajeer iyo Lamu oo ay gacanta ku hayso dowladda Kenya.
Ciidamada Jabuuti oo lagu eedeeyay in ay gubeen guryo ay lahaayeen dad shacab ah.
16/06/2022 - 11:56:06 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Kumanaan qoys ayaa isaga barakacay dhowr xaafadood oo kuyaal magaalada Jabuuti kadib rabshado qowmiyadeed oo ka qarxay magaalada.
16/06/2022 - 11:39:04 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Hoggaamiye sare oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan halganka lagula jiro ciidamada soo duulayaasha ah.